Mareeykanka oo 20 Million ugu deeqay Soomaaliya
Home Somali News Somali Government Mareeykanka oo 20 Million ugu deeqay Soomaaliya
Doowlada Mareeykanka ayaa u ballanqaaday Soomaaliya ineey siineyso 20 Million oo doolar, kadib markii uu maanta Muqdisho soo gaaray wafdi uu hogaaminayo madaxa hay’ada horumarinta Caalamka oo kulan kula qaatay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud.
Wafdigan ayaa madaxweynaha kala hadlay deeq bixinta doowlada mareeykanka iyo sidii ay uga taageeri lahayd dhanka gargaarka iyo dib u dhiska hay’adaha amaanka.
Kadib markii uu soo idlaaday Kulanka, ayaa waxaa si wadajir ah warbaahinta ulahadlay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Shiikh maxamuud, iyo madaxa hay’ada USAID.
Ugu horeyn madaxweyne Xasan Shiikh oo goobta ka hadlay ayaa soo bandhigay in ballanqaad aad u weyn ay ka heleen doowlada mareeykanka gaar ahaan hay’ada USAID, madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay ineey aad usoo dhaweeynayaan Socdaalka wafdigan.
Sidoo kale madaxa hay’ada USAID, ayaa sheegay ineey doowlada Soomaaliya ugu deeqeen lacag gaaraysa 20 Million oo doolar, waxa uuna sheegay in ballanqaadkaan uu ku qotomo dadaalka dheer ee ay hay’ada USAID ugu jirto sidii ay u caawin lahayd doowlada Soomaaliya.
Hay’ada USAID, ayaa sheegtay in lacagtan 20 Million ah ee ay ugu deeqday doowlada Soomaaliya loogu talagalay sidii wax looga qaban lahaa wax soo saarka beeraha Soomaaliya, iyo horumarintoodaba, Caafimaadka, waxbarashada iyo fursadaha kale ee shaqada.